प्रचण्डका लागि अमेरिकाद्वारा ‘नो इन्भेष्टिगेशन’ सर्कुलर जारी - Nepal Bahas Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७५, मंगलवार १९:५९
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध एक नेपालीले अमेरिकामा उजुरी गरेपछि अमेरिकी सरकारले ‘नो इन्भेष्टिगेशन’ को सर्कुलर गरेको छ ।
अमेरिकी दुतावास स्रोतका अनुसार, प्रचण्डका लागि अमेरिकाले विशेष रुपमा जारी गर्ने ‘नो इन्भेष्टिगेशन’ भन्ने आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको हो । प्रचण्डलाई जारी गरिएको उक्त आन्तरिक सर्कुलर भारतीय उच्च नेताहरु सोनिया गान्धी, नरेन्द्र मोदीलगाएत अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरु अमेरिका भ्रमणमा जाने क्रममा जारी हुने गरेको थियो ।
के हो ‘नो इन्भेष्टिगेशन’ सर्कुलर
प्रचण्डको भ्रमण अगाडि अमेरिकी राजदुत रेन्डीबेरीले प्रचण्ड निवासमै पुगेर भेट गरी अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनैपनि झमेला नहुनेमा विश्वस्त पार्दै भ्रमणका क्रममा अमेरिकाले विशिष्ट सम्मानका साथ स्वागत गर्ने बताएका थिए ।
लगत्तै दूताबासको सुरक्षा निकायले यस्तो खालको सर्कुलर जारी गरेको थियो । जुन इमिग्रेशन लगाएत सुरक्षा सम्बद्ध अमेरिकी सरकारी निकायहरुमा पुगिसकेको छ ।
को हुन् प्रचण्डविरुद्ध उजुरी गर्ने ?
पत्नि सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध उजुरी परेको विषय चर्चामा छ । उजुरी परेको समाचार सार्वजनिक भएसँग उजुरीकर्ताका विषयमा पनि सोधखोज हुने नै भयो ।
सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र दुईपटक देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डविरुद्ध आखिर कसले हाल्यो अमेरिकामा मुद्धा ? चासोको विषय बनेको छ । प्रचण्डविरुद्ध केन्टुकी स्टेट युनिभर्सिटीमा कार्यरत डा. तिलक श्रेष्ठले उजुरी गरेको खुलेको छ ।